एउटा बाबा आफ्नो अभिभावकत्व राम्ररी निर्वाह गर्न सक्दैन । बिहान उठ्दा बित्तिकै भट्टीतिर लाग्छ । टिल्ल परेर राती अबेरमात्र घर फर्कन्छ । आफ्ना सन्तानसन्तती र श्रीमतीको भरणपोषणमा कुनै ध्यान दिदैन । तैपनि आफ्ना जड्याँहा साथीहरुसँग हरेक साँझ आफ्ना असफल जिन्दगीको तिक्तता पोख्दछ – साला नेताहरुले देश खत्तम पारे !
भर्खरमात्र आफ्नो शिशुको पास्नी उम्काएकी एउटी आमा आफ्ना स्तनका स्वरुप बिग्रने भयले शिशु पाँच/छ महिना पुग्दासाथ स्तनपान गराउन छाड्छे । शिशुको स्याहारसुसारमा भन्दा बढ्ता आफ्नो सुन्दरता कायम राख्नमा ब्यस्त हुन्छे । बुढीभएकी सासुआमासँग गुनासो गर्नमै कति समय गुजार्छे । फेरि पनि आफ्ना दामली नवविवाहिताहरुसँग देशको राजनीति बिग्रेकोमा गुनासो गरेकै हुन्छे – फटाहा नेताहरुले सबै खत्तम पारे । देश लथालिङ्ग पारे !
एउटा रोजगार युवक आफ्नो काम कहिल्यै समयमा गर्दैन । आफ्नो कामप्रति ऊ कहिल्यै जिम्मेवार बन्दैन । सहकर्मीहरुसँग आफ्नो हाकिमका बारे गुनासो गरिरहन्छ । सार्वजनिक यातायातमा भाडा बचाउन कलेज नपढेपनि बिद्यार्थीको नक्कली परिचयपत्र बनाएर बिद्यार्थी सहुलियतको फाइदा लुट्छ । पैसा बचत गर्न नसकेकोमा विदेशिने योजना बनाउँछ । र, आफ्ना सबै दुर्दशाहरुको भागीदारी सिङ्गो राज्यव्यवस्थालाई लगाउँछ । अनि कुनै एउटा सार्वजनिक स्थानमा आफ्ना केहि साथीहरुसँग जागिरेको पोज झार्दै सूर्य फिल्टरको एक सर्कोसँगै दुखेसो बिसाउँछ – साला नेताहरुले देश खत्तम पारे !
एउटा सरकारी कर्मचारी जागिर पकाउनका लागि मात्र कार्यालय जान्छ । सरुवा बढुवाको चाकरीको लागि नेताको झोले हुन्छ । शिशिर याममा कार्यालय बन्द नभैन्जेल प्रायःजसो घाम लागिराख्ने कार्यालय बाहिरको चौरमा गजधम्म परेर बस्छ । दश मिनेटमा हुने कामका लागि सेवाग्राहीलाई दुई घण्टाभन्दा बढि झुलाउँछ । काम गरेवापत राज्यबाट नियमित तलबसुविधा लिएकै हुन्छ तरपनि सेवाग्राहीबाट अलिकति दाम उपहारको ख्वाहिश राख्न बिर्सदैनन । तीसचालिस थान हजारका नोटमा विदेशीलाई स्वदेशी बनाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र बेच्छ । कानुनतः अवाञ्छनीय सबै कामहरु विशेष आर्थिक चलखेलमा वाञ्छनीय र वैध बनाइदिन्छ । जस्तो मालअड्डाको कर्मचारी एउटाको जग्गा अर्काको नाममा पास गराउने सम्म ल्याकत राख्दछ । विद्युत चुहावट रोक्न गएको विद्युतको कर्मचारी दुईचारसय दाममा सर्वसाधारणलाई उल्टै विद्युत कसरी चोर्ने प्रशिक्षण दिएर आउँछ । जिल्ला विकास समितिको इन्जिनियर उपभोक्ता समितिसँग मिलेर नक्कली बीलभरपाई पास गराउँछ । राजमार्गमा ट्राफिक ब्यवस्थापनका लागि खटिएको ट्राफिक प्रहरी पचास रुपैयाँ दाममा हुटभरी सामान राखेको बस, माइक्रोलाई कारबाही नगरी यात्रा सुचारु गर्ने अनुमति दिन्छ । भन्सारमा चुहावट रोक्न बसेकाहरु भन्छारछली गर्ने तस्करहरुसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्दछन् । सबैले नीजिलाभका लागि बेथितीको कारक आफू भैरहेको इन्कार गर्छन । अनि फेरि चिया वा भट्टी गफमा उनीहरुकै गुनासो हुन्छ – साला स्वर्गजस्तो देशलाई नेताहरुले खत्तम पारे !
आफ्ना नीजि स्वार्थको परिपूर्तिका लागि “जे पनि गर्न पछि नपर्ने” मान्छेहरुको कमी छैन हाम्रो देशमा । जस्तो सुनमा मिसावट भो भनेर सरकारले अनुगमन गर्दा सुनपसल बन्द हुन्छ । पानीमा अखाद्य पदार्थ मिसावट छ सरकारले अनुगमन र कार्वाही शुरु गर्छ पानी बेच्नेहरु पानी बेच्नै बन्द गर्छन । ग्याँसको आपूर्तिमा सहजताकायमका लागि सरकार दुई रंगको सिलिन्डर ब्यवस्था गर्न खोज्छ, ग्याँसबेच्नेहरु किचलो झिक्छन् अनावश्यक ! सरकारले जे गर्न खोजे पनि असफल हुन्छ मेरो देशमा । त्रिशुली थ्रि ए को क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय गर्छ सरकार पूर्वमन्त्रीहरु बखेडा झिक्छन् – कमिसनको चलखेल भो । सरकार लाचारीपूर्वक निर्णय फिर्ता लिन्छ । अनि फेरि परियोजना स्थलका आम सर्वसाधारणहरु आन्दोलन गर्छन – खबरदार सरकार निर्णय फिर्ता लिन मिल्दैन । क्षमता बृद्धिको निर्णय पूर्ववतः कायम गर ! यी रमिताहरुका बारेमा खबर पढ्दा र हेर्दै गर्दा म बबुरो बडो सोचमग्नमा पर्छु – हैन सरकारले गर्नुपर्ने चाँहि के हो ?
भएकै के हो भने अधिकांश हामी नेपालीहरुमा एउटा नराम्रो मानशिकता छ – म मात्र राम्रो, अरु सबै खराब ! आफूलाई मात्र राम्रो देख्ने हाम्रो नजरले अरु जोकोहीको पनि राम्रो भन्दा नराम्रो कुरो बढि देख्दो रहिछ । हाम्रो दृष्ट्रिमा दोश छ । मेरो एकदमै सीमित ज्ञानले बन्छ – हामी सबैमा आत्मजागरण हुनु आवश्यक छ । पहिला हामी सुध्रौ अनि अरु नसुध्रेकोमा गुनासो गर्ने बानी बसालौं । आलोचनाका लागि आलोचना हैन परिवर्तनका लागि आलोचना गर्ने बानी बसालौं ।
ah thik xa guru...gajjab lago..lekh matra haina yesko gudi pani thik lago...kuro 100 percent sahi ho !